'आज PCR नेगेटिभ देखिए पनि भोलि संक्रमण सर्न सक्दछ' - Lokpath Lokpath
२०७७, १२ जेष्ठ सोमबार १०:२५
प्रकाशित मिति : २०७७, १२ जेष्ठ सोमबार १०:२५
काठमाडौं- डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको नाम नसुन्ने कमै होलान् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न जानकारीमुलक स्वास्थ्य टिप्स र जनचेतना जगाउने सूचना सेयर गरिरहन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डे ।
लकडाउन खुल्दा के गर्नुपर्छ ? सामाजिक दुरी कायम गर्न कसरी सम्भव छ ? यो महामारीबाट कसरी बच्ने ? हाम्रो दायित्व के हुने ? लगायतका विषयमा उनी गम्भिर छन् । आममानिसलाई सचेत गराउन उनी लागीपरेका छन् ।
यसैबीच उनले कोरोना ब्यबस्थापनका ब्यबहारिक पाटा विषयमा ‘नोट’ लेख्दै सरकार गम्भिर हुनुपर्ने विभिन्न पाटाहरुबारे मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेका छन् ।
जाजरकोटमा पहिरोमा परी १२ जनाको मृत्यु ( नामावलीसहित)
जाजरकोट । जाजरकोटमा पहिरोको कारण १२ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको बारेकोट
भारतीय मिडियाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको यस्तो आपत्ती
लागूऔषध गाँजा सहित ३ जना पक्राउ